May I help You....... — MYSTERY ZILLION
January 2008 edited February 2011 in File Request
Warmly welcome every body....
လိုချင်တဲ့ Software တွေ ရှိရင် ဒီ topic မှာ တောင်းနိုင်ပါသည်။
full version link ပေးပါ့မယ်။
မရရင်တော့ ဒီအမိုက်အမဲ ကျွန်တော့်ကို ခွေးလွတ် ...အဲ.. ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။
General အောက်မှာ File Request ဆိုတာရှိတယ်ဗျ...
PDS/PDMS software crack version လေးရချင်တယ်...
မရရင်လည်း ခွေး (အဲ့လေ) ခွင့်လွှတ်ပေးပါတယ်....
အဆင်မပြေရင်ပြောပါ။ R မနာပါနဲ့။
ချန်းချန်း စောင့်နေတာ ၁နာရီခွဲကြာသွားတယ်...download ကိုယ့်အလှည့်များရောက်မလားလို့
file size ကတော့သေးသေးလေးပဲ..ဒါပေမယ့်
ပြေ၀ူးဂျ...ချန်းချန်းက rapid share ကို၀ယ်မသုံးနိုင်သေး၀ူး..
တခြားတခုခုနဲ့တင်ပေးပါလား နောက်ပြီး အဲ့ဒါက editor လေးပဲပါတာလား ခင်ဗျာ..
ချန်းချန်းက ဖြစ်နိုင်ရင် full version လေးရချင်တာ..
ဒါပေမယ့် ခုလိုရှာဖွေပေးတာကိုပဲ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်..
ကျွန်တော်ကို PDS/PDMS ရဲ့ နာမည်အပြည့်အစုံလေးဖော်ပြပေးပါ။
full version ကိုရအောင်ရှာပေးပါ့မယ်။
နောက်ထပ် link ပါ
လိုချင်တာက AVEVA PDMS 11.6 ပါ...
်ဖိုင်size ကြီးရင်လညး် link လေးရရင်ချန်းချန်း ရအောင် download ဆွဲပါ့မယ်.
zshare , yousendit , esnip တွေက တော့ အဆင်ပြေပါတယ်
pdf password remover လေး လိုချင်လို့ပါ ..။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါခင်ဗျာ
http://download.yousendit.com/0462271505ABB2A7 The link will expire in7Days
ကို exiter ရေ မင်္ဂလာပါနော်။ လိုချင်တဲ့ software တော့ ရှိသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုလောက် အကူအညီ တောင်းချင်လို့ပါ။ sms ပို့ချင်ရင် ဘယ်နိုင်ငံကို ဘယ် web ကနေ ပို့လို့အဆင်ပြေမယ်ဆိုတာလေး သိချင်လို့ပါ။ ခု လောလောဆယ် ကေကေ သိတာက Sg နဲ့ Ru ကို ပို့တဲ့ site ပဲသိတယ်။ Korea က မင်းသား ဂျွန်စော ဆီကို ပို့ချင်ရင် ဘယ် site ကနေ ပို့ရမလဲဟင်။ နောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ တကယ်ပို့ မလို့။ ဂျွန်စော ဆီတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
exiter ရေ သိရင်ကူညီပေးလိုက်ပါ။ ကုသိုလ်ရတာပေါ့ ကျွန်တော်တော့ မသိလို့ သိရင် ပြောပါတယ်။
ကျွန်တော် PDMS Software ကိုရှာတွေ့ပြီ ။ Full version ပါ။
2 ရက်3ရက်လောက်မှရနိုင်ပါမယ်။
အမ် ကိုစည်သူအောင် ပြောတာကတမျိုးကြီးပဲ။ ကေကေ က နောက်ပြီး အဲလိုပြောလိုက်တာပါ။ အဲဒီ web ကိုတော့ တကယ်ကို သိချင်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုစည်သူ ပြောသလိုမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အသိ တစ်ယောက် က အကူညီတောင်းလို့ ကူညီချင်လို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ စာ က အဓိပ္ပါယ် နှစ်ခွ ဖြစ်သွားတယ်။
ကေကေ ရေ အောက်က site ထဲကို၀င်လေ့လာပြီး သုံးကြည့်ပါ။
web ပေါ်က ပို့တဲ့ sites တွေရှိပေမယ့်ကျွန်တော် ရှာမတွေ့သေးပါ။တွေ့ရင်ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။
အောက်ကဖော်ပြပေးထားတဲ့ site က application လေးကို download ဆွဲပြီး ပို့ကြည့်ပါ။
အဆင်ပြေမှာပါ။ကျွန်တော်တောင် Austrilia ကို Message ပို့ကြည့်တာရပါတယ်။
ကို exiter ရေ အားတော့ နာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မရဘူး ရှင့်။ သူ က ဒီလို ပြောပါတယ်။ "you have not enough credit to call " ပြီးတော့ credit card ၀ယ်ခိုင်းပါတယ်။ အဆင်ပြေရင် ကူညီပေးပါဦး။
ကျေးဇူးဗျို ့အဆင်ပြေသွားပြီ .. ရှဲရှဲ (နှုတ်ခမ်းမွှေးမီးလောင်ခြင်း) ..
phone call တော့မရဘူးလေ။ message ပဲ free ပို့လို့ရပါမယ်။
korea ကို message fee ပဲရမယ်ကွယ်။
proxy software ကောင်းလေးပါ။
Driver Backup Software လေးပါ။
Driver CD မရှိတဲ့ သူများအတွက် အရမ်းအသုံး၀င်ပါသည်။
Winrar file တွေရဲ့ password တွေဖြေဖို့ပါ။
အဆင်ပြေ အချိန်ရရင်တော့ ချန်းချန်းရဲ့ pdms လေးလုပ်ပါအုံးနော်...
From where can i download multi proxy software
pls tell me satungod and sitthu
Thz par pae byar
I wanna kaspersky 7.0.321 for full version
ကိုဖုန်းရေ...kaspersky 7.0.321တော ့မရှိဘူး...kaspersky 7.0 125 full version 6လ....အတွက်လိုင်စင်ကီးတော ့ရှိတယ်..လိုချင်ရင်တော ့မေးလိပ်စာဒီနေရာမှာထားခဲ ့ပါ...:68:
i need NOD 32 ver 3.0.6
i have many user name and password like this
all of them is not ok .. invalid username and password
so if u have .. help me pls.. (:((:((
Kaspersky Anti-Virus 7.0.0.125 d.f key လေးတော့လိုချင်သားပဲ။ ဒီမှာ Alert တွေ ခနခနတက်နေပြီ။ Update လုပ်လို့လည်းမရဘူး။ မြန်မြန်လေးနော်။
VCD တွေကို စုစည်းပြီး
DVD လုပ်တဲ့ software လေးကူညီပေးပါဗျာ...
icefirester အတွက် software download link လေးပါ။
typing tutor ကောင်းကောင်းလေး တခုလောက် ရနိုင်မလားလို့
ခုကျနော့်ဆီမှာ Mavis Beacon9ဘဲရှိတယ်။ သိပ်မကြိုက်ဘူးလေ
မှာသွားယူလိုက်ပါ... အဲဒီမှာ ကက်စပါစကိုင်းလိုင်စင်နဲ့ပတ်သက်ရင် အဖြေရှိတယ်... :101:
lisp gen ဆိုတဲ့ software နဲ့ crack လေးရချင်ပါတယ်...
ကို ZULU အတွက်ပါ။
reply လုပ်တာနောက်ကျသွားတာ sorry ပါ။
chan09 wrote: »
ကိုချန်းချန်းအတွက် software Link လေးပါ။
webmail hack v2.3 ဆိုတာ ဘယ်မှာမှရှာလို့မရဘူး
ကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ်ဗျ။money နဲ့ buy ရမှာဗျ။ မကူညီနိုင်တဲ့အတွက် sorry နော်။
တခြား software တွေတောင်းကြည့်ပါ ။ money နဲ့မ၀ယ်ရရင် ကူညီမယ်နော် megalomanicboy ရေ
ဒီ software လေးက သေးသေးလေးနဲ့ အသုံး၀င်မှာပါ။
Image တစ်ခုရဲ့ file extension ကို ကိုလိုချင်တဲ့ extension ပြောင်းနိုင်မှာပါ။
Be enjoy .
Registery Mechanic 7.0.0.1010 ရဲ့ lincence key လေးများကူညီပေးနိုင်မလားဗျာ ...
7.0တော ့မရှိဘူး....6.0တော ့ရှိတယ်....လိုချင်ရင်ပြောပါ:6:
1. name --- TrapZero & WoKa / FFF
key --- 00000J-YZHXAF-CXGAF0-9VZT34-489GPK
2. name --- TrapZero & WoKa / FFF
key ---- 00000J-YZHXAF-CXX6R7-UTC49M-0UEDCX
နောက်ထပ်ရှိသေးပါသည်။ :-) :-) :-)
အင်တာနက် ဒေါင်းလုပ် မန်နေဂျာ full version လိုချင်လို့ပါ။
ရပါတယ်ဗျာ။ mr.explorer အတွက်အောက်မှာ link ပါ။ :-D :-D :-D
အရမ်း ကျေးဇူုးတင်ပါတယ် ဗျာ။ တကယ်ပါ။
အဆင်ပြေသွားပြီ ... ကျေးဇူးပါပဲဗျာ :1:
ကျေးဇူးပါပဲကို exiter ရေ. အဆင်ပြေပါတယ်။ thzalot.:103: